Ukubhala Indlela Ingqondo Esebenza ngayo
Ukusasazeka kwengqondo yindlela yokwazisa eyenza umqondo wengqondo emsebenzini, ukuxhuma kumbono owodwa, ukuvakalelwa, okanye ukucinga kwindlela elandelayo ngaphandle kokuhamba ngaphandle kokuqhelekileyo .
Nangona i-stream of consciousness ixhomekeke kumsebenzi wabanini-mveli kubandakanya uJames Joyce, uVirginia Woolf, noWilliam Faulkner, le ndlela sele isetyenziswe ngokuphumelelayo ngabalobi bokungabikho kobutyebi kwaye ngokuqhelekileyo kuthiwa yi-freewriting.
Isalathiso sokusasaza kwaqulunqwa ngumfilosofi waseMerika kunye nengcali yeengqondo uWilliam James kwi "Imigaqo Yeengqondo" ngowe-1890 kwaye iye yaqhutyelwa nanamhlanje kwiincwadi zoncwadi nezengqondo zanamhlanje.
Ukuphuthuma kunye noBukhona ekusasazweni kweNkathazo
Ngokuqhelekileyo zisetyenziswe ngabafundisi bokubhala bokubhala njengendlela yokufumana "iindiza zokudala ezihambayo" kubafundi babo ekuqaleni kweeklasi, umgca wokubhala ngokubhaliweyo okubhala ngokuqhelekileyo kubakho abalobi bomhlaba ekukhoyo, ukubaluleka kweso sifundo okanye inkulumo.
Kwimfundiso yobuqili, umtsalane wokuqonda ungasetyenziswe ngumlandisi ukubonisa iingcamango okanye iimvakalelo eziqhubekayo entloko yomlingiswa, ukunyengela umbhali ukukhuthaza abaphulaphuli ukuba baqinisekise ukuba bazama ukubhala ibali. Ezi ngqungquthela zeengcali zeengcali zifunda kwaye zidlulisela ingcamango ngokubanzi kwizethameli, ukubonelela ngokukhawuleza "ekusebenzeni kwangaphakathi" kwesimo sengqondo somntu.
Isiqalo sokungahambi kweziphumlisi kunye nokutshintshwa kuphela kuqhubela phambili le ngcamango yeprosethi ehamba ngokukhululeka apho umfundi kunye nesithethi baxhamla ngokufanayo ukusuka kwisihloko esinye kuya kwesinye, kufana nomntu oya kuhamba xa ehamba ngesihloko esithile-umntu angase aqale ngokuthetha ngeengcamango iifilimu kodwa ekugqibeleni zixoxa ngeengcamango ezigqithiseleyo zeendleko ezidlulileyo, ngokomzekelo, ngokuzenzekelayo kwaye ngaphandle kokuguquka.
Umzekelo ophawulekayo kuMsebenzi we-Nonfiction kaTom Wolfe
Ukusasazwa kokubhala kwengqondo akusiyo nje imisebenzi yokuqhelanisa-iMemo Wol Wolfe "Ukuhlolwa kwe-Acid ye-Acid Test" yipakethe epheleleyo epheleleyo, ehamba ngokugqithiseleyo yolwazi olubonisa ukuhamba kwendwendwe kunye nebali. Thatha lo mzekelo umzekelo:
"-Kesey u-Cornel Wilde Running Jacket ekulungele ukuxhoma eludongeni, i jungle-jim cackuroy jacket egxininiswe ngomgca wokuloba, i-knife, imali, i-DDT, ithebhulethi, amanqaku ebhola, i-flashlight kunye nengca. unako ukuphuma ngaphandle kwefestile, ngaphantsi komgodi ophahleni, ngaphantsi kombhobho wokudonsa, phezu kwodonga uze ufike kwi-jungle engama-45 imizuzwana-kakuhle, kuphela imizuzwana engamashumi amathathu kuphela, kodwa ukuqala kwentloko yiyo yonke into efunekayo, kunye nenxalenye Ngaphandle koko, kuyamangalisa ukuba apha kwi-subperral projection kunye nephosta epholileyo, edibeneyo kwiingqondo zabo kunye neyakhe, kuzo zonke iindawo zayo zokuhamba kunye ne-tributaries kunye ne-convolutions, ukuyijika ngale ndlela kunye nokulinganisa imeko ye-100th ixesha elidlulileyo kwimigqabantshana yokwahlukanisa, njengale: Ukuba banamadoda amaninzi asele apha, amadoda angama-phony, ama-cops kwi-car tan, ama-cops kwi-Volkswagen, bafuna ntoni na? iingcango ezibolileyo zakhiwo le Rat - "
Kwi "Mythopoeality Real: I-Novel's Nonfiction Novel," uMas'ud Zavarzadeh uchaza ukusebenzisa kukaWolfe ngentlawulelo yolwazi njengokhetho olukhethiweyo lwalesi sigaba sencwadi engabonakaliyo, ethi "isicatshulwa sobugcisa bokusetyenziswa kwezi zixhobo kwincwadana yokungabikho kwenkohlakalo yonyango lokuzithoba kwelo meko okanye umntu ochazwe, njengoko evelele kwi-subjectivity ecetywayo (uvelwano) lomvelisi wenkohlakalo. "
Uhambo olushushu lweMimoya
Iziphumo eziPhambili Iinkcazo kunye nemizekelo
I-Rhinoceros beetles, i-Subfamily Dynastinae